Ilungelo lezingane zabazali bangaphandle kwezwe – Bayede News
UMTHETHO i-Immigration Act’ (South African Citizenship
Posted on 23/08/2019 23/08/2019 by Bayede-News
UMTHETHO i-Immigration Act’ (South African Citizenship Act 88 of 1995), uma uchaza umuntu ongumsinsi wokuzimilela uthi ngumuntu ozalelwe kulelo lizwe futhi nabazali bakhe abazalelwe kulo. Lo mthetho njengokuchitshiyelwa kwawo ngowezi-2004 uthi lowo onamaphepha aqondile okuba umhlali wakulelo lizwe unawo wonke amalungelo anikezwa umhlali wakulelo lizwe asemithethweni yezwe nakuMthethosisekelo. Umthetho obizwa ngokuthi i-Identification Act 68 of 1997, uthi lowo muntu kumele anikwe umazisi waseNingizimu Afrika.
Ngokomthetho elawula ukubhaliswa kwezingane ezizelwe nesezidlulile emhlabeni, umuntu ongeyena owaseNingizimu Afrika uchazwa njengalowo onezincwadi zokuba ezweni zesikhashana lapho kuhlanganisa labo abangababaleki nabasuke bekhusele okwesikhashana kodwa bevikelekile ngaphansi komthetho iRefugees Act.Uma laba abakuleli kwenzeka bethola izingane, lokho akusho ukuthi lezo zingane sekumele zibe nomazisi bakuleli, kodwa abazali bazo kumele ukuthi ngesikhathi befaka izicelo zomazisi bazo bakuveze ukuthi bona ngabakuliphi izwe okuyosho ukuthi nezingane ziyobe zingelakulelo lizwe.
Uma lezi zingane sezizelwe futhi sekwaziwa uMqondisi Jikelele woMnyango wezasekhaya uzobe esekhipha isitifiketo sokuzalwa esingenayo inombolo kamazisi uma labo bazali kungebona abakuleli. Njengoba sekuke kwacaciswa abantu abangabokuzalwa ezweni kukhona imithetho abavikelekile kuyo namalungelo athile abanawo abokufika abangenawo.
Ngasohlangothini lwabantu abasuke sebengaphakathi ezweni kodwa abangenazo izingane abazitholele sebelapha, kubalulekile ukwazi ukuthi uthini umthetho ngokuhlaliswa kwabo noma lapho kumele basuswe endaweni abasuke behlala kuyo. Abantu abangabokufika kuleli banelungelo lokuhlaliswa okwesikhashana endaweni ethile.
Ecaleni likaChapelgate Properties v Unlawful Occupiers of Erf lowezi-2016 kwakuwukuthi uMasipala waseJohannesburgh unaso yini isibopho sokuzamela enye indawo abantu ababengene ngokungemthetho endaweni yenkampani iChapelgate Properties. Iningi labantu ababengene kule ndawo ngokungemthetho ababeyingxenye yamaphesenti angama-60 kwakungeboba abaseNingizimu Afrika. Okwakufakazela lokho ukuthi nezincwadi ezibagunyaza ukuba kuleli babengenazo. Umsebenzi wenkantolo waba lula ngoba yanquma ukuba basuswe. Inkantolo yabuye yanquma ukuba uMasipala utholele indawo abanye ababesusiswe okwakuvela ukuthi bayintula ngempela indawo, kodwa nalokho kwakunombandela ngoba kwakumele baveze ukuthi banazo izimvume zokuba eNingizimu Afrika.